Imicimbi yokujabulisa - Sun City,Ningizimu Afrika
Sun City,Ningizimu Afrika
I-Sun City isinikeze ukuzijabulisa okungakaze kube khona, kusukela ekuthokozelweni kwezinkanyezi zezintambo ezivakashelayo kuze kube yilapho kunamathebula namathebula okudlala, izivakashi eSun City ziyohlale zijabulisa.
I-Moviezone ivuliwe izinsuku ezingu-7 ngesonto futhi ine-movie 2 ebonisa ama-movie. I-Magic Company Games Arcade izogcina izingane zijabule ngamavidiyo nemidlalo exhumana. Ibha yezemidlalo ye-ampmarket, Abahwebi, isakaza imidlalo yakamuva ezikrini ezinkulu. Kulabo abathanda ukudansa ebusuku, iSilhouette Nightclub yindawo okufanele ibe kuyo.
I-Sun City inezinhlobonhlobo zokudla, kusukela ekudleni komndeni okuvamile okuya ezindaweni zokudlela ezinhle. I-shopaholics izokwenziwa yizici ze-designers nezitolo zokufinyelela.
Ngayo yonke le ndlela yokuzijabulisa, izivakashi zingase zizizwe zikhungathekile, kodwa iseluleko siseduze esikhungweni se-Welcome Centre esisekungena esikhungweni sezokuzijabulisa.
I-Sun City Extravaganza ibonisa ukuhlanganiswa kwezemidlalo, ulwazi lokuzijabulisa nokuklama. Imishanguzo ibonakala kumbono weNhlangano weNobhala wokuthi yi-Extravaganza okufanele ibukeke kanjani, nokuthi kufanele ikhulume kanjani nezilaleli zayo.
Ngokuvamile ama-extravaganzas asebenza esakhiweni esibaqondisayo. Uchungechunge lwezingoma nezinto zokudansa, okungahambisani nalesi sakhiwo, zihlelwe. Ngokuvamile akusikho indaba ehambisanayo, futhi ngokuqinisekile ayikho inhloso enkulu kulo mdlalo ngaphandle kokungabonakali kokuzijabulisa kwekhasimende lamazwe angaphandle eSun City.
Kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo yendawo kanye namakhonsathi ama-superstars angamazwe omhlaba wonke kulo lonke i-Sun City Theater naseSun City Superbowl. Vakashela i-Computicket.com uphinde useshe i-Sun City ukwenza ukubhuka kwamamodeli wamanje namasasa.